के मोबाईलको चार्ज टिक्दैन ? यो हो चार्ज गर्ने सही तरिका ! थाहा पाउनुहोस्
Homeसमाचारके मोबाईलको चार्ज टिक्दैन ? यो हो चार्ज गर्ने सही तरिका ! थाहा पाउनुहोस्
September 25, 2020 admin समाचार 11193
नयाँ–नयाँ टेक्नो’लोजीसँगै फोनहरु विकसित हुँदै गएका छन् । सुविधाहरु बढिरहेका छन् । स्मार्टफो’नमा खासै सुधार हुन नसकि’रहेको एउटै समस्या हो– ब्याट्री लाइफ ।
महँगा र आधु’निक प्रविधिका स्मार्ट फोनमा झन ब्याट्री धेरै नटिक्ने समस्या हुन्छ । ब्या’ट्रीको चार्ज सकिएपछि चार्ज गर्न पनि घन्टौं समय लाग्छ । तर केही उपाय अपना’यौं भने चार्ज चाडो हुने गर्छ । सही तरि’कारले कसरी गर्ने मोबाइल चार्ज ? केही टिप्स यस्ता छन्–
मोबाइ’ललाई फ्लाइट मोडमा राख्नुहोस्
यो एकदम सामान्य र सजि’लो तरिका हो । जसबाट ए’कदमै तीव्र गतिमा मोबा’इल चार्ज गर्न सकिन्छ । फ्लाइट मोडमा मोबाइल राख्दा सबै फङ्सन बन्द हुँदैनन् । तर, जब तपाईंले फोन फ्लाइट मोडमा राख्नु’हुन्छ तब फोन गर्न मिल्दैन र जिपिए’सजस्ता फिचरहरूले काम गर्न बन्द हुन्छ ।
फोन पूरै बन्द गरेर चा’र्ज गर्ने
मोबाइल फोन चा’र्जका बारेमा मानि’सहरुका आ–आफ्नै तर्क भए पनि मो’बाइल चार्ज गर्दा फोन अफ गरेर चार्ज गर्दा चार्ज चाडो हुने गर्छ । फोन अन नै राखेर चार्ज गर्दा यो बिग्रन्छ भन्ने पनि गरिन्छ । तर, यो गलत हो । तर, मो’बाइल चलाउँदै चार्ज गर्दा भने ब्याट्रीमा समस्या निम्तिन्छ । मोबा’इल तात्ने स’मस्या बढी देखिन्छ ।
मोबा’इल युए’सबी पोर्टबाट चार्ज नगर्नु उत्तम
मोबाइल फोन युए’सबी पोर्टबाट भन्दा बिजु’लीबाट धेरै छिटो चार्ज हुन्छ । उदाहर’णका रूपमा एप्पल फोनका लागि उक्त कम्प’नीको सुझाब छ कि मोबाइल फोन बिजुली’बाट मात्र चार्ज गर्नुहोस् ।
तात्ने गरी ब्या’ट्री राख्दा यसको क्षम’तामा ह्रास आउँछ । उदाहरणका लागि एप्पल’का अनुसार गर्मीको कारण मोबा’इलको ब्याट्रीको क्षमता खराब हुन्छ । फोनलाई घा’मबाट पनि टाढा राख्नुपर्छ ।
आधि’कारिक चार्जर मात्र प्रयो’ग गर्नुहोस्
सबै चार्ज’र एउटै देखिन्छन्, तर एउटै भने कहि’ल्यै हुँदैनन् । सबैभन्दा राम्रो फोनको आधि’कारिक चार्जर बाट मात्र चार्ज गर्नु हुन्छ । यसले सुर’क्षित तरिकाबाट सबैभन्दा राम्रो परि’णाम दिन्छ ।
खबर हब बाट साभार
संकट हटाउन राशी अनुसार के गर्ने जान्नुहोस्
December 5, 2020 admin समाचार 6850
यतिबेला ना’यिका श्वेता खड्का र उनका हुनेवा’ला पति विजयन्द्र सिंह रावतलाई वि’बाह लागिसकेको छ । किनमेल, विबाहको तया’री र पार्टीका कारण श्वेता र बिजयेन्द्रको प’रिवारका सदस्यलाई भ्याईनभ्याई भए’को छ । उनीहरुको यही मंसिर २२ गते
April 26, 2021 admin समाचार 3849
सरकारले निषे’धाज्ञा गर्नुअघि काठमाण्डौ उपत्यका छाडेर घर जान चाहनेका लागि दुई दिनको सम’य दिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठ’माण्डौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडी’ओ कालीप्रसाद पराजुलीले कोभिड सङ्क्र’मणको स्थिति गम्भीर देखिएकोले कम्तीमा एक हप्ता
January 10, 2021 admin समाचार 5546